Oukitel को बारे समाचारहरू: फोनहरू, समीक्षा, रिलिजहरू र अधिक - Androidsis | Androidsis
हाल हामी एन्ड्रोइडमा फोन ब्रान्डको एक ठूलो संख्या फेला पार्दछौं। हामीले हालसालैको एउटा ब्रान्ड देख्यौं जुन हामी बजारमा अधिक र अधिक बारम्बार देख्छौं Oukitel हो। यो एक नाम हो कि लोकप्रियता प्राप्त गर्न को लागी शुरुआत छ, जबकि यो एक हालको कम्पनी हो।
Oukitel २०० 2007 मा चीनको शेन्जेन शहरमा स्थापना भएको थियो। यस शहरलाई देशको प्राविधिक राजधानीको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ, यस क्षेत्रका धेरै कम्पनीहरूको घर। यो २०० 2008 सम्म थिएन कि ब्रान्डको पहिलो फोन स्टोरहरूमा हिट गर्न थाले। २०० In मा उनीहरूले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारको केही अंश चीनमा उनीहरूको ठूलो कारखाना खोलेको अनुभव गरे। त्यस समयदेखि, Oukitel एन्ड्रोइड बजारमा एक महत्वपूर्ण स्थान बनाइरहेको छ।
यसको मुख्य बजार एशियाई हो, चीन वा कोरिया जस्ता देशहरूसँग। तर लामो समय को लागी यूरोपबाट उनीहरुको फोन किन्न सजिलो छ। Oukitel कम मूल्यको साथ तर राम्रो विशिष्टताको साथ मोडलहरू सुरू गर्दछ। यो सामान्यतया मध्य-दायरा र इनपुट दायरामा केन्द्रित हुन्छ। तिनीहरू पनि सामान्यतया तिनीहरूको ठूलो ब्याट्री को लागी बाहिर खडा।
Oukitel WP15: विनिर्देशों, मूल्य र उपलब्धता
5G युग यहाँ छ, तर त्यहाँ हाम्रो मोबाइल मा 5G हुनु भन्दा राम्रो केहि छ? हो, भरोसा गर्नुहोस् ...
WP15 15.600 mAh ब्याट्री संग Oukitel को नयाँ स्मार्टफोन हो
ब्याट्री धेरै निर्माताहरु र प्रयोगकर्ताहरु को लागी मुख्य टाउको दुखाइ को एक रहन्छ।
नयाँ Oukitel WP6 अर्को मार्च २० मा बिक्रीमा जान्छ
नयाँ स्मार्टफोन खरीद गर्दा हामी आफैंले मूल्यमा आधारित हुनु हुँदैन, यद्यपि यो सामान्यतया मुख्य हो ...
OUKITEL C17 प्रो अब $ ...84,99। को लागि किन्न सकिन्छ
केही दिन अघि हामीले तपाईंलाई पहिले नै बताइसकेका छौं कि OUKITEL C17 प्रो अस्थायी रूपमा उत्तम मूल्यमा सुरू हुन्छ। A…
OUKITEL C17 प्रो कसरी प्राप्त गर्ने पत्ता लगाउनुहोस्
एक हप्ता अघि हामीले आधिकारिक रूपमा OUKITEL C17 प्रो भेट्यौं। चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ मोडल, जुन ...
द्वारा राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस बनाउँछ2वर्ष .
त्यहाँ धेरै पोष्टहरू छन् जुन हामीले OUKITEL स्मार्टफोनहरूलाई समर्पित गरेका छौं। ठूलो अंश मा किनभने ...
भर्खरका हप्ताहरूमा, हामीले अर्को टर्मिनलको बारेमा धेरै अवसरहरूमा कुरा गर्यौं जुन एसियाली फर्म ओकिटेलले बजारमा थाल्नेछ, ...
नयाँ OUKITEL Y4800, M 48 Mpx र अधिक
मध्य-दायरा एन्ड्रोइडमा स्मार्टफोनहरूको प्रस्ताव अनियंत्रित रूपमा जारी छ। र हामी हेर्छौं कि यो हरेक पटक कसरी फेर्दछ ...
हामी केहि हप्ताहरु को लागी अर्को Oukitel प्रक्षेपण को बारे मा कुरा गर्दै छौं। हामी य Y्ग वाई 4800०० को बारेमा कुरा गर्दैछौं, टर्मिनल सुरुमा ...
Oukitel C15 प्रो +, C15 प्रो को एक भिटामिनयुक्त संस्करण प्रस्तुत गर्दछ
टेलिफोनीको दुनिया केवल उच्च-अन्त टर्मिनलबाट बनेको छैन, यद्यपि तिनीहरू ती मोडलहरू हुन् जुन अधिकांश ...
हाम्रो पुरानो टर्मिनल नवीकरण गर्दा, हामीले निर्णय गर्न सक्षम हुन कारकहरूको एक श्रृंखलालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ, होईन ...